Qalabka Dayactirka Inbox ayaa Fashilmay
Bogga ugu weyn Products DataNumen Outlook Repair Cilad lama filaan ah ayaa hor istaagtay gelitaanka faylkan. U adeegso ScanDisk si aad u hubiso diskiga khaladaadka, ka dibna isku day inaad mar kale isticmaasho qalabka Dayactirka Sanduuqa.
Qalabka Dayactirka Sanduuqa oo ku Fashilmay Dayactirka Faylasha PST ee Musuqmaasuqa ama Waxyeello soo Gaartay
Markaad isticmaasho Qalabka Dayactirka Sanduuqa Muuqaalka (Scanpst.exe) si aad u dayactirto faylka shaqsiyadeed ee gaarka loo leeyahay (PST) ee waxyeeloobay ama kharribmay, qalabku wuu fashilmay oo wuxuu soo sheegayaa farriinta khaladka soo socda:
Qalabka Dayactirka Sanduuqa ma aqoonsana faylka xxxx.pst. Wax macluumaad ah lama soo celin karo.
Hoos waxaa ku yaal shaashadda khaladka:
Musuqmaasuqa ama waxyeelada faylka PST aad ayey uxun tahay oo Inbox Repair Tool (Scanpst) ma awoodo inuu hagaajiyo feylka.
Waa inaad isticmaashaa DataNumen Outlook Repair si loo hagaajiyo faylka PST ee musuqmaasuqa ah. Iyadoo la adeegsanayo barnaamij casri ah iyo habka algorithm, DataNumen Outlook Repair had iyo jeer soo kaban most ee xogta dib loo soo ceshan karo waxay sameystaan ​​feyl PST musuqmaasuq ah, sidaas waa aaladda ugu wanaagsan ee soo kabashada Muuqaalka ee suuqa.
Faylka Musuqmaasuqa: Imtixaan2.pst
Faylka waxaa hagaajiyay DataNumen Outlook Repair: Tijaabada2_fixed.pst